Edito | Ny Valosoa Vaovao
Fitsipahan’ny HCC ny lalam-pifidianana : Miboridana tanteraka ny fitondarana sy ireo depiote-ny
par gvalosoa | Mai 6, 2018 | Edito
Raha ny lojika politika na ny rafitra demokratika dia ny fametraham-pialan’ny Governemanta Olivier Mahafaly no tokony hitranga, tao aorian’ny nitsipahan’ny HCC, n any Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana ireo volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana. Raha ny nambaran’ireo depiote ho amin’ny Fanovana miisa 73 dia nandaniana volabe 50 tapitrisa Ar isaky ny depiote nanangan-tanana, nandany iny volavolan-dalàm-pifidianana iny, nefa dia izao notsipahan’ny HCC izao. Fivoriana tsy ara-potoana miisa 4 no natao nefa dia nodakan’ny andrimpanjana etsy Ambohidahy ambavafo ny Praiministra sy ny governemantany, ny antoko HVM sy ireo Parlemanterany, na depiote io na senateran’i Madagasikara, nandany iny volavolan-dalàna tsy alehany iny. Miala ny governemanta, manaraka avy eo ny ambiny , toy ny ao amin’ny Parlemanta roa ary miafara amin’ny fialàn’ny filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina, satria dia efa fitondrana tsy mahavita azy sy manaonao foana no misy eto amintsika. Na inona na inona hambara dia tsy vitan’ny mihozongozona intsony ity fitondrana HVM ity, fa efa manomboka miala amin’ny fakany ary mitady lalana hivoahana mba tsy hianjeran’ny hatezeram-bahoka, izay sisa no hataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny forongony. Mbola manao gisa lahy mangala-ketsa foana anefa ireo Depiote mpila ranondranony , toa aningahy Depiote voafidy etsy Atsimondrano Jaona Elite. Raha tena mpanao politika ingahirainy dia ny fametraham-pialàna tsy misy hatak’andro tsy ho solombavambahoaka intsony koa no tokony hataony, mahalalà menatra, satria tsy ny vahoaka izay tsy noraharahiany no tsy mila azy ankehitriny fa ny mpitsara ambony ao amin’ny HCC mihitsy no tsy nanaiky ny hadalàna vitan’izy ireo tamin’ny fandaniana iny lalàna sadasada iny. Raha tsy izay no mitranga dia voamarina fa tena efa ny vola sy ny voninahitra no mibaiko ny feon’ny fieritreretan’izy...
Fikambanana Erikerika Madagasikara : Mitaky ny hisokafan’ny orinasa AAA sy ny MBS
par gvalosoa | Mai 3, 2018 | Edito
Tonga nanotrona ny tolona nataon’ny vahoaka Malagasy miaraka amin’ireo depiote miisa 73 ny fikambanana Erikerika Madagasikara avy any ampitandranomasina, teny amin’ny kianjan’ny 13 mai ny faran’ny herinandro teo, amin’izao fandalovan’izy ireo eto an-tanindrazana izao . Tsy mandry ny sainay hoy Jean Philippe Rafidison amin’izao fahasahiranana mahazo ny vahoaka Malagasy izao . Avelao hoy izy hisokatra ny orinasa AAA hiasan’ny Malagasy , fa aza hanaovana antsojay toy izao , tokantrano sy fianakaviana maro hoy izy no mivelona amin’io orinasa io . Eo ihany koa ny fitakiana ny hisokafan’ny MBS mba hisian’ny fifandanjana eo amin’ny fandraisana ny vaovao ho an’ny rehetra . Ny fikambanana Erikerika Madagasikara dia miombom-po amin’ny Malagasy amin’ny tolona atrehiny , ka na any ampitandranomasina aza izahay hoy Jean Philippe Rafidison dia miaraka amin’ny vahoaka Malagasy hatrany . Helisoa ...
Hetsiky ny depiote 73 omaly : Fitokonambe, tsy tana intsony izao Miala Rajao sy ny forongony
Fitokonambe, tsy tana intsony izao, miala ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny forongony, na Rajao sy ny forongony. Azo fintinina amin’izay ny hetsika nataon’ireo Depiote miisa 73 ho an’ny Fanovana sy ny vahoaka omaly. Tsy ny mpiasa irery ihany no miditra amin’izay fitokonana faobe izay, fa na ny mpianatra koa aza dia manatevina ny hetsika ho amin’ny fanovana izay. Raha ny omaly io no jerena dia efa azo lazaina ho mikatso tanteraka ny raharaham-panjakana satria ny ministra efa tsy mandalo birao intsony, ny mpiasa ny ankamaroany dia manaraka ireo Depiote ho amin’ny Fanovana, izay no ilazana fa tsy tana intsony ny fitokonana faobe eto an-drenivohitra. Tetsy amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena tetsy Anosy no nanomboka ny hetsika omaly, nitety ireo ministera sy ireo sampan-draharaha teo amin’ny manodidina teo ireo depiote sy ny vahoaka, avy eo nitarika azy ireo ho amin’ny fitokonana faobe, nahomby izany amin’ny ankapobeny. Nandalovana ny tao amin’ny ministeran’ny fambolena sy fiompiana, ny Radio sy ny televiziona Malagasy, ny ministeran’ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany, ny ministeran’ny raharaham-bahiny, ny foibem-pitondran’ny hetra ao Anosy, ny ministeran’ny toekarena sy ny teti-pivoarana, ny tao amin’ny CNAPS Ampefiloha. Nihazo ny teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) avy eo ny rehetra, dia an-tongotra avokoa izany rehetra izany, nitanjozotra ny vahoaka marobe nanaraka ireo depiote mpitarika. Tao amin’ny HCC, voalaza fa mbola eo am-pandinihana ny fitorian’ireo depiote ho amin’ny fanonganana ny filohampirenena ireo mpitsara avo. Nihazo ny teny amin’ny ministeran’ny mponina Ambohijatovo avy eo ny rehetra, ary niakatra teny amin’ny foiben-toeran’ny JIRAMA Ambohijatovo ambony no namaranana ny diabe, nialohan’ny famaranana ny fotoana, nanaovan’ireo mpitarika ny tatitra tao amin’ny kianjan’ny 13 mey...
Tsy karama mahavelona ihany, fa karama mitovy ho an’ny diplaoma mitovy
Teny fanevan’ny mpiasa nankalaza ny Fetin’ny Asa tamin’ity taona ity ny “Karama mahavelona”. Mitombina ary tena ara-drariny sy hitsiny izany fitakiana izany. Iarahan’ny mpiasa malagasy miaina, tsy ny eo amin’ny sehatry ny asam-panjakana ihany fa ho an’ny mpiasa eo amin’ny orinasa tsy miankina ihany koa, ny tsy fahampian’ny karama izay zara raha ampy mandritra ny herinandro iray. Tsy azo lavina kosa anefa fa misy ny mandray karama betsaka noho ny an’ny hafa na dia vitsy an’isa aza izy ireo. Mety tsy mazava amin’ny rehetra ny anton’izany satria ny sarambaben’ny olona dia mihevitra fa rehefa mpiasam-panjakana dia mitovy daholo ny karama raisina ho an’ny sokajy iray, na amin’ny sehatra inona, na amin’ny sehatra inona iasany. Tsara ho fantatra anefa fa misy amin’ny mpiasam-panjakana ny manana sata manokana (statuts particuliers) ary misy koa ny mandray tambin-karama (indemnités) ambonin’ny karamany noho ny andraikitra sahaniny. Izany tsy fitoviana izany no anton’ny fivoriana nokarakarain’ny “Grands Corps” tamin’ny andron’ny tetezamita izay niteraka ny fitakiana: “mari-karama mitovy ho an’ny mari-pahaizana mitovy” na “alignement” araka ny famaritana tamin’izany fotoana izany. Porofon’izany tsy fitoviana izany ny mari-karaman’ny manamboninahitra mivoaka avy ao amin’ny Akademia Miaramila sy ny injeniera mivoaka avy ao amin’ny Polyteknika. Samy mahazo ny diplaoma “Master 2” ireo satria mianatra dimy taona aorinan’ny bakalorea kanefa ny an’itsy voalohany ny mari-karama dia 2 600 ho an’ny mivoaka ho “sous lieutenant” ary ho an’ny faharoa dia mari-karama 950 ho an’ny injeniera mpiana-draharaha. Torak’izany koa ny mpianatra ho manamboninahitra polisim-pirenena rehefa mivoaka dia mari-karama 1 600. Tsy mahagaga loatra raha manatanteraka an-jambany ny baikon’ny mpitondra ireo antsoina ho mpitandro ny filaminana rehefa misy fitakiana ataon’ny mpiasa. Manampy ny tsy fahombiazana eo amin’ny...
Mila mailo ireo depiote ho amin’ny fanovana
par gvalosoa | Mai 1, 2018 | Edito
Mila mailo hatrany ny rehetra ao anatin’izao tolona tarihan’ny Solombavambahoaka ho an’ny fanovana izao satria tsy kely lalana ny mpijapy sy ny mpanararaotra . Hafa mihitsy mantsy ny tanjon’izy ireny dia ny handrava efa sy hamboly korontana na koa hitady seza . Tsy tokony havela hahazo vahana ny olona tahaka izany . Tsiahivina fa resaka lalam-pifidianana no niantombohan’ny olana izay nolanian’ny sasany amboletra teny amin’ny Lapan’ny Antenimiera . Tsy misy firenena mivoatra sy mandroso ao anaty kolikoly na inona na inona fanazavana . Hatrany amboalohany dia manao toetra mandidy dia homana ny fitondrana tarihan’ny Hvm sady miezaka mametraka ny paipaika maloto hahafahana mamikitra eo amin’ny fitondrana . Tsy tolon’ny Depiote irery intsony ity raharaha ity fa lasa tolom-bahoaka satria tsy maintsy ilay vahoaka no hiharan’ny lalàna adaladala tadiavin’ny sasany hitondrana amin’ny fifidianana . Fa mandritra izany rehetra izany araka ny nambarantsika dia ao ireo olona misisika mafy satria te hahazo seza , tsy misy iraharahian’izy ireny ny tolona sy ny faty olona tamin’ny Sabotsy fa ny seza no mahamaika azy . Tsy maintsy ahisaka eny amin’ny sisiny ny mpanakorontana sady tsy misy rahateo ny toerana ho azy ireny . Nisy mihitsy ny olona izay nanao vava be tamin’ny Solombavambahoaka ho an’ny fanovana andro vitsy lasa izay saingy tsy rony tsy vetiny teo dia ireny fa nijokojoko nankeo amin’ny kianjan’ny 13 Mey nilaza fa manohana ny tolona . Tsy adala akory ny vahoaka manoloana izany rehetra izany fa mahafantatra ny tokony hataony, sa ahoana hoy ianao ? Rina...
Vahoaka mitroatra, ny tantaran’izany teto
par gvalosoa | Avr 28, 2018 | Edito
Tsy tongatonga ho azy ny fionganan’ny fitondrana nifandimby teto Madagasikara nanomboka ny volana Mey 1972. Tamin’izany fotoana izany dia tsy nisy ny fiandrianam-pirenena satria ny mpanjanaka ihany no nifehy ny lafiny politika sy ny toekarena. Nanaporofo izany ireo frantsay nolazaina fa mpanotrona teknika (assistants techniques) tany amin’ny minisitera rehetra sy tao amin’ny governemanta mihitsy. Ny tany midadasika mamokatra manerana ny Nosy dia nobodoin’ny frantsay avokoa. Toy izany koa ireo ozinina mpanodina vokatra. Ny programam-pampianarana dia nanaraka ny tany frantsa avokoa. Nozanahan’ny mpanjanaka ihany koa ny kolontsaina sy soatoavina Malagasy. Marihana fa tsy nanana olana kosa ny Malagasy teo amin’ny fiatrehana ny vidim-piainana satria voalohany manerana an’i Afrika teo amin’ny fahambonian’ny fahefamividin’ny tsirairay. Tsara tsiahivina fa nanoratra ny “Boky Manga” ny filohan’ny Repoblika I, kanefa vitsy ny nahalala ny fisiany. Ankoatr’ireo antony niteraka ny fanoheran’ny mpianatra teny amin’ny anjerimanontolo ireo toejavatra ireo. Nampitroatra ny vahoaka Malagasy, tamin’ny fotoana tsy nampoizina, ny fandatsahan-drà teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey sy ny fandefasana sesitany ireo mpianatra tany Nosilava. Tsy anisan’ny nandray anjara tamin’izany fampiasan-kery izany kosa anefa ny tafika sy zandary ary ny polisy fa ny FRS (Force Républicaine de Sécurité) ihany no nanatanteraka izany. Niova anarana ho GMP (Groupe Mobile de la Police) izy io taorian’izany. Tsy idirana lalina ny anton’ny fametraham-pialan’ny Jeneraly Ramanantsoa Gabriel fa raha ny zava-nisy dia azo antoka fa ny fifandraisana teo amin’ny mpanjanaka sy ny fanjakana malagasy no fototr’izany ary noho ny nangalan’ity farany ho fananam-pirenena ireo orinasan’ny voanjo. Raha ny Repoblika II kosa no hadihadiana dia sehatra maro no niteraka ny fitrohafan’ny Malagasy. Nanoratra ny “Boky Mena” ny filohan’ny Repoblika Demokratika Malagasy izay “vina” noheverina hampivoatra...
Visites du jour: 3 509
Poll total votes: 1564